Chinyorwa chevanopedzisa veVakadzi muVhura Source Mipiro 2019 | Linux Vakapindwa muropa
Sa CEO weBMM, Ginni Rometty ndomumwe wevakanyanya kukosha vakadzi mune yakavhurika sosi yenyika.
Red Hat iri kununura kechishanu Vakadzi muVhura Source Mipiro.
Misiyano inyaya yekukurukurirana muminda dzakasiyana, zvese paWall Street uye muHollywood. Iyo yakavhurika sosi yepasirose haina kusara. Vangani vakadzi vakatanhamara vaungadoma?
Chinangwa ndechekukudza vakadzi avo ita zvakakosha kuvhura sosi mapurojekiti nenharaunda, kana kune avo vanoita a kushandiswa kutsva kwemaitiro avo.
Pane zvikamu zviviri zvinopihwa. Mumwe unopa mubairo wezvidzidzo uye mumwe mupiro wenzanga, kunyange hazvo pasina chikamu chebhizinesi.
Vanokunda vachaziviswa muna Chivabvu. Aya ndiwo mazita:
1 Vakadzi muVhura Source Mipiro kune vakadzi vanotora chikamu munharaunda.
1.1 Hong Phuc Dang
1.2 Gabriela deQueiroz
1.3 Limor Fied
1.4 Nithya ruff
1.5 Pia Mancini
2 Vakadzi muWakavhurwa Source Mipiro kune vakadzi vechikoro.
2.1 Sayantika banik
2.2 Kate compton
2.3 Saloni garg
2.4 Mallory gasi
2.5 Alina matyukhina
3 Sarudzo yevanokunda
Vakadzi muVhura Source Mipiro kune vakadzi vanotora chikamu munharaunda.
Inopa mubairo vakadzi vanoshanda uye vanozvipirawo mune yakavhurika sosi mapurojekiti.
Nenhoroondo yemakore gumi nerimwe munyika yepasirose sosi, ndiye muvambi weFOSSASIA pamwe nekushanda pane mamwe mapurojekiti.
FOSSASIA ndeye nharaunda inotsvaga kusimudzira hupenyu hwevanhu nekuchinjana matekinoroji uye ruzivo.
Kana ari mamwe mapurojekiti, anotora chikamu muSUS.AI, Pocket Science Lab uye Eventyay.
SUS.AI ndeye chimiro chekugadzira vabatsiri vezwi nepo Pocket Science Lab iri Hardware uye software lab. Eventyay, zvakadaro, iri mhinduro yekuronga zviitiko.
Gabriela aive praive munhu wekutanga kubva kuLatin America kuve nhengo yakajairika yeR Foundation (R ndiwo mutauro wechirongwa wekushandisa manhamba).
Zvinoenderana nechiono chake icho R chishandiso chekudzidzisa nekupa vamwe simba, akafunga vakawana R-Ladies pamwe ne el R Consortium Nharaunda Dhijitari & Inosanganisira Yekushanda Boka.
Adafruit misika yakavhura sosi Hardware.
Iye ndiye muvambi uye maininjiniya weAdafruit Maindasitiri.
Adafruit Maindasitiri ndeye yakavhurwa sosi Hardware kambani, Chinangwa chayo ndechekupararira mukuwedzera kune kushambadzira kwepamhepo kwerudzi urwu rwezvigadzirwa.
Ndiyo Musoro weComcast Open Source Implementation, hofori yekutaurirana. Akateedzera pamwe nekupa zano vanovhura akasiyana akasiyana open source zvirongwa.
Akabatsirawo kuzvirongwa zvekusimudzira kusiyanisa kumisangano yakavhurwa sosi muNorth America.
Iye ndiye mubatanidzwa uye CEO weOpen Collective pamwe chete nemusiki weDemocracy-OS uye DemocracyEarth.
Vhura Collective inobatsira yakavhurika sosi yenzvimbo yemapurojekiti kusimudza mari pachena.
Democracy-OS ndeye chikuva chevanhu kutora chikamu, apo DemocracyEarth iri bato rezvematongerwo enyika rakavakirwa pamisimboti yekodhi yakavhurika.
Vakadzi muWakavhurwa Source Mipiro kune vakadzi vechikoro.
Vakadzi vari venguva yakazara vadzidzi parizvino vakanyoreswa kukoreji kana kuyunivhesiti vanopihwa.
Vanopedzisa gore rino ndi:
Iye mudzidzi paSir M. Visvesvaraya Institute of Technology, uko kwaari kuita degree reBachelor apo achibatsirana kwemakore matatu pamapurojekiti akavhurwa.
Akashanda kuGoogle Developer Group, Women Techmakers, uye Terrain Smart Safety System (TSSS).
Banik akagashira mudzidzi kudzidza kuGrace Hopper Mhemberero India mu2018 zvakare kushanda pamwe muDevFest 2018 Bangalore.
Tracery ndeye yakavhurwa sosi programming mutauro.
Ari kugadzirira Ph.D. paUniversity yeCalifornia kuSanta Cruz achinyora zvidzidzo zveArtificial Intelligence.
Ndiye musiki we Tracery, yakavhurika sosi mutauro pamwe seti yemaraibhurari zvakafanana.
Ari kutsvaga bachelor's degree mucomputer sainzi iye achishingairira kutora matanho akasiyana siyana, anosanganisira Women Techmaker Boka, 1 Mamiriyoni evakadzi kuTekinoro, Anita Borg, uye Vakadzi-Ndiani-Code.
Akasarudzwa seMozilla Open Leader muna 2018, uye anogara achipa ku Wikimedia, GNOME, uye Cloud Native Computing Foundation (CNCF),
Akaremara uye ari kudzidza degree refizikisi uye masvomhu. Icho chikamu cheRensselaer Center yeOn Open Source (RCOS) kupi yakagadzira iyo otomatiki Door Kudzora Projekiti uye yakachipa-mutengo chidimbu cheBluetooth inoenderana neRaspberry Pi qInogona kuchinjika kune iripo otomatiki gonhi yekuvhura michina.
Iye mumiriri wePDD pamwe neCybersecurity Researcher kuCanada Institute for Cybersecurity.
Iri kushanda kukudziridza nzira yekudzivirira kuzivikanwa kweakavhurika sosi software vanogadzira.
Ndiyo mugadziri weiyo AI-yakavakirwa maitiro que es inokwanisa kuvanza uye kusazivisa maitiro ekunyorera kubva kuvhura sosi vanogadzira.
Vhoti yekusarudza vanokunda yaive yeruzhinji uye yakaitwa kuburikidza newebhu kusvika Kukadzi 25. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti akati wandei evasarudzwa akabatanidzwa kune Hardware uye software yekuvandudza mapurojekiti uye kwete chete mukusimudzira mutsauko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vokupedzisira veVakadzi muOpen Source Mipiro 2019 vaizivikanwa
Kusarura kusarura. Kutsigira vakadzi-chete maropafadzo zvakafanana nekutsigira vachena chete.